किन दुख्छ टाउको? यस्ता छन् कारण – Everest Dainik – News from Nepal
किन दुख्छ टाउको? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं, असार ६ । टाउकोको कुनै भागमा महसुस हुनेगरी दुख्नुलाई सामान्यतया टाउको दुखेको भनिन्छ । मस्तिष्कको आवरण, धमनी र मांसपेशीमा हुने पीडा नै टाउको दुख्नु हो, जुन संवेदनशील हुन्छ । टाउको दुख्नु साझा समस्याजस्तै भइसकेको छ । अधिकांश मानिसले आजकल कहीँ न कहीँ टाउको दुखिरहेको गुनासो गर्छन् । विभिन्न प्रकारले टाउको दुख्ने गर्छ । टाउको दुखाइलाई मेडिकल भाषामा प्राइमरी र सेकेन्डरी हेडेकगरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये पनि प्राइमरी हेडेकका तीन उपविभाजन छन् ।
टाउको दुख्ने सामान्य समस्या हो भन्ने अधिकांशमा भ्रम छ । टाउको दुखाइ अन्य रोगको लक्षण हुने भएकाले समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । सामान्य खालको टाउको दुखाइले पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । टाउको दुख्यो भन्दैमा जथाभावी पेनकिलरको प्रयोग गर्नुहुँदैन । जसले स्वास्थ्यमा अन्य असर पार्न सक्ने भएकाले चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।